भरपर्दो बाटो बनाउने नेता जन्माएन पश्चिम सुर्खेतले, – Nilo Aakash
भरपर्दो बाटो बनाउने नेता जन्माएन पश्चिम सुर्खेतले,
निलो आकाश संवाददाता ३१ श्रावण २०७७, शनिबार १९:२८
२०४९ सालमा काङ्ग्रेस बाट निर्वाचित शिबराज जोशी यातायात सहायकमन्त्री भएपछि बड्डिचौर बेनिघाट ग्रामीण सडकका नाममा काम सुरु गरियो र बिजौरा सम्म बाटो पुग्यो । जनतालाइ राजापुरबाट नुन बोकेर ल्याउनुपर्ने बाध्यता हटेर गयो । बिजौरा सम्म बाटो बनाएकै कारण जनताले पटक पटक जोशीलाई निर्वाचित गराए । जोशी सौभाग्यले संचार मन्त्री, जनसंख्या बाताबरण राज्य मन्त्री सम्म भए । द्वन्द्वकाल पछि बिकासको ठुलो आसा बोकेका जनताले संबिधान बनाउन नरबहादुर बिष्टलाई जिताए कारणबस संविधान घोषणा हुन सकेन । त्यसपछि तप्तबहादुर बिष्ट बिजयी भए । उनका पालामा संबिधान बन्यो बिष्ट संचार राज्यमन्त्री बनेपछि पुल सडक संजाल धेरै जोडिए । बड्डिचौर बेनिघाट सडक को स्तरोन्नतीका लागि बजेट बिनियोजन गरियो । ग्यामिनेखोला, चौर खोला, र मैनघाट खोलामा पक्कि पुल निर्माण गरियो । खम्मगाडे पलैटे हुँदै बाबियाचौर सम्म बाटो पिच भयो । बिजौरा सम्म ग्राबेल, बिजौरा देखि बेनिघाट सम्म रणनीतिक सडक र ५ करोड बजेट तप्त बिष्टको समयका बिनियोजन भयो र लगाम सम्म गाडि गुड्न थाले । बिष्टको समयमा बेनिघाट सम्म विभिन्न खोलाहरुमा पुलको डिपिआर र सर्भे समेत गरिएको छ ।
बाटो ग्राभेल गरेर बड्डिचौर सम्म पैदल हिड्नुपर्ने बाध्यता हटे पनि लगाम बेतानका नागरिक लाई बिजौरा सम्म हिड्नुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन । प्रत्यक्ष रुपमा निर्वाचित बिन्दमान बिष्ट र नवराज रावतको समयमा मदन भण्डारी राजमार्ग नामाकरण भयो अनि स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रावतले डिपिआरको आफै उद्घाटन गरे तर त्यसको काम सुरुवात अहिलेसम्म भएको छैन । सर्भे मै बिवाद सृजना भयो । अहिले सदरमुकाम बीरेन्द्रनगर पुग्नको लागि बर्षातको समयमा नागरिक लाई सास्ती हुने गरेको छ । बाटोमा यात्रा गर्दा अहिले यात्रिहरुले नेताहरुलाई सराप्ने समेत गर्दछन ।
पश्चिमको बिकासका लागि शिबराज जोशी, नरबहादुर बिष्ट, तप्त बिष्ट, बिन्दमान बिष्ट, नवराज रावत, हृदयराम थानी, खड्क बस्याल, यज्ञ बहादुर बुढाक्षेत्री, पुष्पा घर्ती, नन्दा शर्मा निर्वाचित र समानुपातिक बाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरु हुन भने जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका प्रमुख छबिलाल सिग्देल अहिले समन्वयको भुमिका मा छन । जिल्लाका पार्टिगतरुपमा नेतृत्व गर्ने नेताहरु पनि पश्चिम सुर्खेतकै बढि रहेका छन । तर हरेक बर्ष झै यस बर्ष पनि पश्चिम को बाटोमा गाडि गुड्नको लागि कठिन भएको छ । यतिबेला सामाजिक संजालमा पश्चिम को वराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने का नागरिक हरुले बाटो बनाउन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन ।
सामाजिक संजाल फेसबुकमा गोकुल पाण्डे यस्तो लेख्छन “वास्तवमा संविधान जनता झुक्याउने र विधान कार्यकर्ता झुक्याउने खाली खाम रहेछ । सुर्खेत जिल्ला बराहताल गाउपालिका बड्डिचौर देखि पञ्चपुरी हुँदै चौकुने सम्म पुग्ने बाटो (मदन भन्डारी राजमार्ग) को बीचमा ठुला खाडल ले गाडी एम्बुलेन्स समेत चल्न सक्दैन, कता छ्न करोडौं का गाडी चढ्ने जनताका प्रतिनिधि, सरकार चलाउने मन्त्री ? बिरामी को बिजोग छ, कोरोनाले मानिसका लास बढदै जान्छन, पहिरोले मानिसका गाउँ पुरीदै जान्छन !!! जे लेख, जे भन !!! रेलवयको ठेक्का रोकिदैन, गाडी किन्न छोडीदैन !!! जनताका कुरा त चुनावमा गर्ने न हो !!! नेकपा को एउटा गुट सरकार बचाउन ब्यस्त ,अर्को गुट सरकार हटाउन र भागबन्डामा ब्यस्त, प्रतिपक्ष आउदो अधिबेशनको लागि विभिन्न बिभाग को पद बाड्न र गुट बलियो बनाउन ब्यस्त, नेकपा प्रतिपक्षमा भएको भए देस आन्दोलन मै ब्यस्त हुन्थे, अहिले आफ्ना गुटको प्रति रक्षामै ब्यस्त छ्न, काङ्ग्रेसका जनप्रतिनिधि के मा ब्यस्त छन ? जनताका जिबिका र बिकासका अनि शिक्षा र स्वास्थ्यका कुरा कसले उठाउने हो ?“ पाण्डेले यसरी सरकार संग जवाफ मागेका छन ।
पाण्डेको स्टाटसमा खगेन्द्र सुबेदिले “आएको र भएको बजेट पनि कोरोनाको निहुमा कति आधा भएहोला के को बाटोघाटो बन्नु र, यो बाटो बन्यो भने त चुनाव आउदा जनताहरुको सामु लग्ने एजेण्डा केही हुदैन , त्यसैले जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति सरकारमा गए पनि यो बाटो बनाउदैनन् । किनभने यही बाटो देखाएरै चुनावमा जनताको मत तान्नु छ ।“ यसरी नेताहरुलाइ सामाजिक सञ्जालमै लेखेका छन । एम्बुलेन्सले समयमै बिरामी अस्पताल पु¥याउन नसक्दा कतिको ज्यान अकालमै गएको छ । तत्काल बाटोको बिषयमा जनप्रतिनिधिहरुले सोच्न पश्चिम सुर्खेतका नागरिकहरुको आवाज उठेको छ ।